﻿	Cheesy Bean Burritos (Freezer Friendly) - ချက်ပြုတ်နည်းများ
သိကောင်းစရာများနှင့် Great Ideas!
ချိုမြိန်အချဉ် meatballs နှင့်အတူအဘယ်သို့စားရမည်နည်း
© Copyright ©2021 All rights reserved magnaetesweb.com | ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ
Cheesy Bean Burritos (Freezer Friendly)
Cheesy Bean Burritos သည်အစားအစာစားစရာများကို သုံး၍ ဆာလောင်နေသောဝမ်းကိုဖြည့်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
နူးညံ့သောဂျုံမှုန့် tortillas များသည်ဆန်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ ပဲနှင့်ဒိန်ခဲများစွာနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ သူတို့ဟာပြီးပြည့်စုံသောအမြန် meatless အဓိကပန်းကန်များအတွက်ပရိုတိန်းနှင့်ပြည့်၏!
Hearty သက်သတ်လွတ် Burritos
Veggie burritos အရမ်း yummy ဖြစ်ကြပြီး oh ဒါ cheesy, သင့်မိသားစုကသူတို့ကိုအကြိမ်ကြိမ်တောင်းဆိုလိမ့်မည်!
ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်သင်ဖွယ်ရှိသင့်ရဲ့စားစရာခန်းထဲမှာရှိသည် - သူတို့သည်သင် groceries.The အဆာရရှိရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသည့်အခါသူတို့အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောအလုပ်များသောရက်သတ္တပတ်များအတွက်ကြီးမြတ်အောင်အမြန်နှင့်အရသာနှစ် ဦး စလုံးဖြစ်ပါတယ်။
ပဲမျိုးစုံနှင့်ဒိန်ခဲ burritos များသည်ဘောလုံးမလေ့ကျင့်မီအမြန်နေ့လည်စာ (သို့) နေ့လည်ခင်းအစာစားသည်။
အဘယ်အရာကို taco သုပ်နှင့်အတူကောင်းစွာသွားသည်
ပါဝင်ပစ္စည်းများ / အပြောင်းအလဲများ
ပဲ ပဲစေ့သို့ရောက်သည့်အခါအနက်ရောင်ပဲများသည်ဤစာရွက်အတွက်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်။ သင်ပဲရှိသည့်မည်သည့်အတွက်မဆိုပဲပဲများကိုလဲလှယ်နိုင်သည်။
ပိုတိုပဲများ၊ မြောက်ပိုင်းမြောက်ပဲများ၊ ကျောက်ကပ်များ၊
သငျသညျကျန်ရှိသောရှိပါက မက္ကဆီကန်ဆန် ဒါမှမဟုတ် ဆန်လုံးညို , ထိုလွန်းအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ရုံကိုလှိမ့်ရှေ့တော်၌အသီးအသီး Burrito သို့ Salsa တစ်ကျုံးထည့်ပါ။ ကူဆပ် ဒါမှမဟုတ် တောင်အမေရိကားမှထွက်သောချက်စားလို့ရသည့်အစေ့တစ်မျိုး အရမ်းperfectlyုံအလုပ်လုပ်လိမ့်မယ်!
ဒိန်ခဲ gooey ဒိန်ခဲကောင်းတစ် ဦး ဆေးမပါဘဲ burrito အဘယ်သူမျှမပြည့်စုံလိမ့်မည်! ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုမှာငရုတ်သီးဂျက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်သင် cheddar သို့မဟုတ်သင်၌ရှိသည့်အခြားအရာများကိုသုံးနိုင်သည်။
Bean Burritos သည်ပျော်စရာကောင်းသည့်ရောနှောပါဝင်သည့်အရာအမျိုးမျိုးကိုမိမိကိုယ်ကိုချေးငှားသည်။
ပဲများမရှိ ပြဿနာမရှိပါဘူး! ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှစ်ဆသို့မဟုတ်သုံးဆနှင့်သင်အကြိုက်ဆုံးပါဝင်သည်။ မှို, ငရုတ်ကောင်း, zucchini နှင့်ပြောင်းဖူးအားလုံးအလွန်ကြီးစွာသောရွေးချယ်မှုရှိပါတယ်။
မြေပြင်ကြက်ဆင်သို့မဟုတ်အမဲသားထည့်ပါစေ အမဲသားနှင့်ပဲ burritos ။
Jalapenos၊ ထောပတ်သီးအချပ်များ၊ ကုန်တယ်ခရမ်းချဉ်သီးများသို့မဟုတ်သင်အကြိုက်ဆုံးပင်ဖြစ်သည် taco toppings ထည့်နိုင်သည်။
သူတို့ကိုသို့လှည့်ဖို့အလျင်အမြန်စေလွှတ်ကြက်ဥထည့်ပါ နံနက်စာ Burritos ။
Bean Burritos လုပ်နည်း
ဖြည့်စွက်: ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုပဲအနက်ရောင်နှင့်ရောစပ်ပြီးရာသီအလိုက်ပါထည့်ပါ (သို့မဟုတ်) taco ရာသီ ) ။ ထူသည်အထိမျှတည်ထားပါ။
စုစုပေါင်း: tortillas များကိုဆန်၊ ဖြည့်စွက်။ ဒိန်ခဲနှင့်ဖြည့်ပါ။ နှစ်ဖက်ခေါက် နှင့်ချဉ်သောမုန့်နှင့်အပိုဆောင်းနှင့်အတူဝတ်ပြုကြလော့ ငံပြာရည် ။
ဖြစ်နိုင်ခြေများသည်အဆုံးမဲ့ဖြစ်သည်၊ သင်ထပ်ဖြည့်သည့်ထပ်တူထပ်ပေါင်းများကိုထပ်ထည့်ပါ အကြိုက်ဆုံး taco သုပ်စာရွက် !
မိုးမခ ငံပြာရည်, ဂွမ်ကလာ , သရက်သီးသုပ် ဒါမှမဟုတ်ချဉ်သောမုန့်
ကျဉ်းမြောင်းသော: မြဝတီ သို့မဟုတ်ဖျက်စီးဆလတ်။
အရသာရှိသော ချပ်အနက်ရောင်သံလွင်သီး, jalapenos သို့မဟုတ်အစိမ်းရောင်ချီလီ
ဒိန်ခဲ: ဒိန်ခဲမဆို! Cotija, cheddar, ဒါမှမဟုတ် mozzarella ။
တစ်ဘက်ထည့်ပါ မက္ကဆီကန်ပြောင်း (Elote) ငရုတ်ကောင်း ပြောင်းဖူးအသုပ် , လတ်ဆတ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်ကျဆင်းလာ, ဒါမှမဟုတ်တစ် ဦး လတ်ဆတ်တဲ့ခရမ်းချဉ်သီးနှင့်ထောပတ်သီးသုပ် !
အိမ်လုပ်အေးခဲ Burritos လုပ်ရန်
ဤရွေ့ကားကျိန်းသေအေးခဲဆုပ်ကိုင်အဖြစ်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နှင့်နေ့လည်စာသွားနှင့်စတိုးဆိုင်ဝယ်အေးခဲ Burritos ထက်အများကြီးပိုကောင်းများမှာ! သူတို့ကရေခဲသေတ္တာထဲမှာလအနည်းငယ်ထားသင့်တယ်။
အေးခဲ Burritos လုပ်ရန်:
တစ် ဦး ချင်းစီပလပ်စတစ်ထုပ်ပိုးခြင်းသို့မဟုတ်သားရေစာစက္ကူ၌ထုပ်။
အေးခဲ Burritos ကိုချက်ပြုတ်ရန်:
၁-၂ မိနစ်သို့မဟုတ်အပူမှတဆင့်ဒိန်ခဲအရည်ကျိုသည်အထိမိုက်ကရိုဝေ့ (ပ်) တွင်အပူပေးပါ။
ချဉ်သောမုန့်, ​​ဆာဆာနှင့် guacamole နှင့်အတူအမှုတော်ကိုထမ်းရွက်!
Yummy Meatless အစားအစာများ
Black Bean Tacos - အမြန်နှင့်အာဟာရရှိသောအစားအစာ။
လွယ်ကူသောပဲဟင်းသိုးထိန်းရဲ့ Pie - အရသာရှိတဲ့သက်သတ်လွတ်စားစရာ
Black Bean ကို Quinoa သုပ်
သက်သတ်လွတ်ငရုတ်သီး - အကြိုက်ဆုံးနှစ်သိမ့်အစားအစာ!
ခရမ်းချဉ်သီး Pie - အရသာရှိတဲ့ညစာစား
ပြင်ဆင်ချိန်ဆယ့်ငါး မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်၁၀ မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်၂၅ မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၈ burritos စာရေးသူHolly Nilsson ဆန်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ပဲများနှင့်ဒိန်ခဲများဖြင့်ပြည့်နေသောညင်ညင်သာသာမုန့်ညက်။ ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢၁ ဇွန်း သံလွင်ဆီ
▢½ ခွက် ကြက်သွန်နီ ထုကုန်တယ်
▢၁ ငရုတ်ကောင်းစိမ်း အရက်
▢၁ လေးညှင်း ကြက်သွန်ဖြူ minced
▢နှစ် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ငရုတ်သီးမှုန့်
▢½ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ဇီ
▢၁၆ အောင်စ ပဲအနက်ရောင် ညှစ်ခြင်းနှင့်သုတ်ခြင်း
▢၁ ခွက် ချက်ချင်းဆန်
▢၁ ခွက် ရေ
▢¼ ခွက် ငံပြာရည်
▢နှစ် ခွက် Monterey ဂျက်ဒိန်ခဲ ဖျက်စီး
▢၈ tortillas မုန့်ညက် ၈ လက်မ
ပျော့ပြောင်းသည်အထိသံလွင်ဆီ၌ကြက်သွန်နီနှင့်ငရုတ်ကောင်းမှုန့်ကိုချက်ပါ။ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငရုတ်သီးမှုန့်၊ ဇီနှင့်ပဲအနက်ရောင်များကိုရောမွှေပါ။ ၂ မိနစ်ထက်ပိုမွှေပါ။
ရေ၊ ချက်ချင်းဆန်နှင့်ဆာလပ်စ်ကိုဟင်းခတ်အလေးတစ်လုံးထဲပေါင်းထည့်ပါ။ ဆူအောင်တည်ဆောင်ခဲ့ရမည်။ ဖုံးအုပ်ထားပါနှင့်အပူမှဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ ၅ မိနစ်အနားယူပါ။
အဆိုပါ tortillas ကျော်ဒိန်ခဲကိုဝေ။ tortillas အပေါ် bean အရောအနှောနှင့်ဆန်အရောအနှောကိုခွဲပါ။
နှစ်ဖက်စလုံးနှင့်ခေါက် Burritos အတွက်ခေါက်။ ဆန္ဒရှိလျှင်ဆာလ်ဆာနှင့်ချဉ်သောမုန့်နှင့်အတူအမှုတော်ကိုထမ်းရွက်။
ဆန်စပါးရှည်နှင့်ပြုလုပ်ရန် 2/3 ခွက်ဖြူဆန်၊ 1 1/3 ခွက်ရေနှင့် 1/4 ခွက်ဆာဆာကိုပြီနောက်ဟင်းတွင်ပေါင်းစပ်ပါ။ 15 မိနစ်သို့မဟုတ်အရည်စုပ်ယူသည်အထိဖုံးအုပ်ထားပါ။
Burritos ဖုတ်ရန် 9x13 ဒယ်အိုးထဲမှာထားပါ။ ဒိန်ခဲ ၁/၂ ခွက်ထပ်မံထည့်ကာ ၃၅၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တွင် ၁၅ မိနစ်မှ ၂၀ မိနစ်အထိဒိန်ခဲအရည်ကျိုသည်အထိဖြည့်ပါ။
အေးခဲနေသော Burritos ပြုလုပ်ရန်၊ ညွှန်ကြားသည်အတိုင်းပြင်ဆင်ပါ၊ ပလပ်စတစ်ထုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်သားရေစာဖြင့်တစ်ကိုယ်တည်းခြုံ။ အိတ်ထဲတွင်တံဆိပ်ခတ်ထားပါ
အပူပေးရန် ရေခဲသေတ္တာထဲမှာအရည်ပျော်ပြီးမိုက်ကရိုဝေ့ဖ်ထဲမှာ 1-2 မိနစ်ဒါမှမဟုတ်အပူမှီတိုင်အောင်အပူပေးပါ။
(ပေးထားသောအာဟာရဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်သည်ခန့်မှန်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်အသုံးပြုသောကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားလိမ့်မည်။ )
သော့ချက်စာလုံးbeur burritos, bean burritos စာရွက်, bean Burritos အောင်ဘယ်လို သင်တန်းအဓိကသင်တန်း ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုကော်ပီကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝပိတ်ပင်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။
Air Fryer ဘေကွန် Scallops ထုပ်
လွယ်ကူသောဒိန်ခဲ Fondue စာရွက်
Cheesecake အချိုပွဲ Tacos! (မုန့်ဖုတ်ဒိန်ခဲမရှိပါ!)
မနက်စာ Burritos (Freezer Friendly)
ကူပွန် Lingo နှင့်ဝေါဟာရ
အိမ်လုပ် Ricotta ဒိန်ခဲ (ပါဝင်ပစ္စည်းများ ၄)